Obere Oche Oche China Manufacturers & Suppliers & Factory
Obere Oche Oche - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Obere Oche Oche)
PET Egwuregwu Ngwá Ngwá Agha Maka Ido Ugbo Ala
Nkọwapụta ngwaahịa Xinghongchang na-enye gị ụzọ ndụ nke ọkụ ọkụ - Nke a na- emepụta ihe nkiri kpo oku maka oche ụlọ mposi. Dika ihe eji ekpochapu kpo oku ihe omuma bu uzo ohuru di iche iche nke oku oku, o na - abanye na ahihia oku n'ihi uru ndi ozo. 1. Mpempe akwụkwọ carbon carbon, nke na-ekpo ọkụ dị ọkụ. 2....
Ụdị ikpo ọkụ oche oche na-ekpo ọkụ
Ụdị ikpo ọkụ oche oche na-ekpo ọkụ. Anyị bụ ndị na-ahụ maka ihe mgbochi ọkụ na-ekpo ọkụ nke JOMOO, PANASONIC, KOHLER, BROAN wdg. XHC bụ ọkachamara ihe nkiri ọkụ ọkụ maka ndị ahịa ụwa. Anyị ebufelarị anyị ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ jupụtara na Europe, UK, USA ASIA ets. A na-eji ihe nkiri egwu egwu mee ihe n'ọtụtụ...
Nkọwapụta ngwaahịa Ebe anyị na-ekpo ọkụ maka Cultivation Na-eto Eto na-agụnye ihe nkiri kpo oku nke infrared, nke ọhụrụ ụdị nkà na ụzụ ọkụ. Ọ bụ ezigbo ihe ọkụkụ maka ihe ọkụkụ na-eto eto.High a na-agbanwe agbanwe na ike ịzọpụta.PTC onwe-regulating funcion property which does not have to worry about overheat...
Winter Jiri 12v ụgbọala oche ọkụ ọkụ eletriki
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe na-ekpo ọkụ na-echekwa maka ọkụ ọkụ ụgbọ ala. Mee ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-akwọ ụgbọala. Ọ dịkwa oke mma maka ihu igwe oyi ma ọ bụ igwe mgbede . Nri ọkụ na-eri mgbe nile na-enye aka iji nọgide na-enwe nkwarụ ma nọgide na-ekesa ọbara . Ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ na kọntaktị dị mma na PVC, ọ bụ nduzi...
Ihe Mgbochi PET na-agbanwe agbanwe maka oche oche
Nkọwapụta ngwaahịa Na-eche oyi n'oge oyi mgbe ị na-aga ụlọ mposi? Ọ dị mkpa ka ị nwetaghachi ahụ ọkụ n'ahụ gị? Chọta ihe ngwọta gị n'okpuru. Xinghongchang na-enye gị ebe obibi ụlọ mposi dị ọkụ na nkasi obi. Na-emepụta ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ nke na-enweghị ihe mgbochi, ebe mposi na-enye gị ọkụ na nke...
Obere Okpokoro Ugbo Ogwu Ugbo Ocha Ocha
Obere Okpokoro Ugbo Ogwu Ugbo Ocha Ocha Atụmatụ: 1.Ọdịmma ihe onwunwe na ndụ ogologo oge 2.Nkeghari akuku nke oma, ikpo oku ngwa ngwa, ichekwa ike. 3.Nchịkwa Nchekwa Ụdị: Ịnọgide Na-ekpo ọkụ 2-3 Awa - Ọkara Ịkpọ Ọkụ 3-5 Awa 4.Wechiproof 3.7V / 4500 mAh Lithium batrị na-eme ka ọ dị njikere iji snow ma ọ bụ Rain, Mgbe...
UL Kwadobere Pet Heat Mat maka USA
UL Kwadobere Pet Heat Mat maka USA Ahịa ọkụ na ahịa USA. Akwadoro maka n'èzí na ime ụlọ Low watts Akwa maka ọtụtụ ụmụ anụmanụ dị ka nwamba, rabbits, ferrets, pig pigs, na anụ ọhịa Ihe na-eguzogide
Na-egwusi egwu maka ihe ndina maka obere obere
Na-egwusi egwu maka ihe ndina maka obere obere Ihe mgbochi kpo oku infrared. Na-enye obi ụtọ ogologo oge. Ngwa ngwa na nchekwa. Ezigbo njem njem. Ezigbo maka nwa amụrụ ọhụrụ, nkwenye na ndị agadi anu ulo. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị...
Obere anụmanụ Ngwa nri Pet Pet
Pet Bed & Ngwa Ụdị na nwamba, Nkịta, anụmanụ Samll Ngwa Ngwa Pet Pet Atụmatụ: 1. Ebere iji nye ụra gị ezigbo ụra 2. Na-echekwa ahụ ọkụ gị n'oge oyi 3. Nanị tinye ya na ụlọ anụ ụlọ 4. Bee ike na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na temp dịka 122 C (50 ℃), mweghachi mwepụ nke ọkpọ ọkụ mgbe temp dị 5 ℃ ala Nkọwapụta Ngwaahịa...
Igwe ọkụ okpomọkụ oche oche dị ọkụ na UL
Igwe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ Nkọwapụta ngwaahịa XHC bụ ọkachamara ihe nkiri ọkụ ọkụ maka ndị ahịa ụwa. Anyị ebufelarị anyị ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ jupụtara na Europe, UK, USA ASIA ets. A na-eji ihe nkiri egwu egwu mee ihe n'ọtụtụ ngwa. Were mposi maara ihe dịka ọmụmaatụ. Anyị ejiriwo aka na-arụ ọrụ ụlọ mposi igwe...
Igwe ọkụ ọkụ oche oche
Igwe ihe ọkụkụ oche oche ụlọ mposi bụ ihe a na-ejikọta na oche, na-emekarị mkpuchi, nke a na-agbanye na mposi mposi maka ụlọ mposi eji eji oche. Mgbe mkpuchi dị ala, a na-ejikwa mkpuchi ya dị ka oche mgbe ọ dị mkpa. Nkọwapụta ngwaahịa XHC bụ ọkachamara ihe nkiri ọkụ ọkụ maka ndị ahịa ụwa. Anyị ebufelarị anyị ihe nkiri...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu maka oche oche
Igwe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Dị Elu Na-ekpocha Ngwá Ọrụ maka Ụlọ Ahịa oche Nkọwapụta ngwaahịa XHC nwere ike inye gị nnukwu mma nke ihe nkiri ihe nkiri kpo oku na ịsọ mpi na ezigbo ọrụ. A nabatara oru OEM. Anyị na-ekpocha oche ebe mposi nke PTC dị ka ihe nkiri ọkụ ọkụ. Kedu ihe bụ PTC? Igwe ihe omimi...
Obere Oche Oche Obere oche oche Ebe obibi oche oche Obere Ugbo Ogwu Igwe oche oche oche Ebe Obere Pet Square Egwu Nchekwa Nche Obere Ntaneti Ụlọ Obere